Ny fanesorana an'i Kim Dotcom ny fanjakana lalina, 'The Dark Overlord' sy ny mpanohitra bebe kokoa: Martin Vrijland
Ny Kim Dotcom 'famoahana ny fanjakana lalina', 'The Dark Overlord' ary fanoherana bebe kokoa
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 7 Janoary 2019	• 9 Comments
Manohy mampitolagaga ahy izy ireo fa olona tsotra no voafitaka amin'ny tantara momba ny hacks. Mazava ho azy fa manana ny fampahalalam-baovao mahazatra izahay, izay ahitana ny feo mihisatry ny mpandàla ny vaovao, miaraka amin'ny pokerface tsara voaofana, ny herin'ny tantara, fa ny fampitam-baovao hafa koa dia ampiasaina mba hanakanana ny mason'ny olona. Avy amin'ny finoana ireo mpanakorontana Rosiana izay mitarika ny fifidianana, dia manendry ireo hackers mpikomy malaza izay maniry ny hampiseho ny 'toe-po lalina'.
Vao haingana izahay no nahita ny tatitra momba ny 'The Dark Overlord' milaza fa nangalatra ny antontan-taratasy momba ny 9 / 11 izy ireo ary hamoaka azy ireo fa tsy an-tapitrisany amin'ny bitcoins karama. Io ihany koa no famantarana fa misy ifanaovantsika eto, satria ny bitcoin dia azo adika amin'ny alalan'ny blockchain. Midika izany fa azo atao foana ny miala amin'ny làlana farany amin'ny bitcoins ary ny hackers dia mianjera amin'ny harona.
Tsy misy mpanao gazety matotra ve eto amin'ity izao tontolo izao ity izay manangana ity olana ity? Tsia, izany no hany marina. Ny fifantohana dia mifantoka amin'ny sphinx hafa ary tsy misy olona manontany ny fanontaniana tsotra. Ny fampahalalam-baovao hafa dia te-handika bebe kokoa amin'ny tsy siosisy toy izany, satria mety ho hitanao ny tifitra voalamina.
Ohatra iray hafa ny tantaran'i Wikileaks sy Julian Assange. Ny vondron'olona dia tsy mahatsapa fa mianjera amin'ny sokajy fanoherana manara-maso izany rehetra izany, satria tena azo inoana izany. Nafahan'i Assange ny 2012 hatramin'ny volana jona tao amin'ny Masoivoho Ekoatoriana any Londres ary efa nahazo ny toerany maherifo. Na i Pamela Anderson aza dia ho namana akaiky azy. Sarobidy ho an'ny tantara izany!
Ny anton'izany fanoherana izany dia ny fanaovana fanoherana amin'ny fomba azo itokisana, fa ny fomba hanombohan'ny vahoaka manomboka mino izany. Ny fanontaniana tsotra indrindra dia tsy manontaniana na tsy raharahiana. Ohatra, raha te-handoa vola amin'ny bitcoins ny vondrona hacker, dia izao manaraka izao no fanontaniana tokana sy tena ilaina:Ahoana no irian'izy ireo hanangona sy hampiasa ny vola raha toa ka ny lanjan'ny bitcoin dia midika fa ny fampitambarana rehetra dia azo atao?"Noho izany dia marika mazava ny hoe 'The Dark Overlord' dia ohatra iray hafa izay tsy maintsy ho tonga lafatra. Ary ahoana ny momba ny haino aman-jery rehetra manodidina an'i Julian Assange? "Raha toa ka tsara loatra ny ho marina."
Ny vohikala Xandernieuws fanta-daza manerantany dia tonga omaly omaly niaraka tamin'ity hafatra manaraka ity:
Mpakarakara hetsika fanta-daza Kim Dotcom: amin'ity taona ity dia tsy voahelingelina ireo mpanao heloka bevava ao amin'ny Deep State
'Politisiana sy mpitsara ao am-paosin'ny tompondaka sy billiards, izay mandray tombony amin'ny ady sy ny korontana ary mamadika ny demokrasia ho toy ny tsindrona' - Ny Hacks any Alemana dia mampiseho fifamatorana be eo amin'ireo mpanao politika sy media
Vakio ny hafatra manontolo eto.
Hatramin'i 2015 Kim Dotcom dia nandao ny làlam-pamokarana 'dipoavatra' nomerika momba ny famoahana ireo alàlan'ny WikiLeaks momba ny mailaky ny Hillary Clinton nandritra ny fifidianana 2016. Tamin'ny volana Febroary dia nanambara izy fa ilay hetsika antsoina hoe Rosiana hack an'ny Antoko Demokratika, izay nipoitra tanteraka ny 'fampitahorana Rosiana tamin'ny fifidianana', dia tsy misy dikany. "Avelao aho hanome toky anao fa ny hack an'ny DNC dia tsy hoe hack. Izy io dia mpiloka miaraka amin'ny tehina usb. Fantatro izany satria fantatro hoe iza izany ary nahoana. "
Fotoana izay hanombohan'ny olona manomboka amin'ny sisiny roa ambany ary ny fisainana dia mitombo fa ny fampitam-baovao mahazatra dia ampiasaina mba hampisehoana ny fampahalalam-baovao mahazatra. Izany dia mitranga amin'ny alàlan'ny tsipika vaovao izay tsy maintsy hifehezana ny sambo eny amin'ny morontsiraka.
Mino ve ianao fa mety hisy ny fisehoan-javatra amin'ny 'fantatra hackers'? Raha afaka namono olona tao amin'ny fiarany i John F. Kennedy, nipetraka teo akaikin'ny vadiny, andro maizimaizina sy teo anoloan'ny fakantsary, moa ve izany karazana 'hackers fantatra' izany tsy mitsahatra miteny zavatra hafa? Tsia, mazava ho azy fa tsy. Afaka manao izany izy ireo, satria ny vahoaka dia voatery mitazona ny zaridaina amin'ny fisehoan'ny fanoherana, manome ny fahatsapana fa misy ireo olona izay mikomy sy mikarakara ilay raharaha (mba tsy hikomy) . Raha manana zavatra holazaina eto amin'ity izao tontolo izao ity ianao, dia ho voasivana ianao ary tsy ho azonao ny fisian'ny fampahalalam-baovao mahazatra. Tsy noraharahaina ianao ary nakambana (amin'ny fomba iainako azy) ary raha misy zava-dehibe loatra, dia misy foana ny safidy hoe 'manadio'.
Ny fifantohan-tsaina avy amin'ny fanoherana voamarina dia miverimberina amin'ny toe-javatra toy ny lalina, mba tsy hipoitra ny tena toetry ny fanjakana. Natolotra ho an'ireo maherifo izay sahy mampidi-doza ny fiainany noho ny "fanakorontanana goavana" izay andrasan'ny tsirairay. Mandritra izany fotoana izany dia misy lalao roa hivoatra, izay hanakanana ny endrika fanoherana mandritra ny fotoana lava. Io no tena toetry ny tena lalina izay manara-maso tanteraka ny lalao ny fisian'ny fanoherana. Nametraka an'i Donald Trump ihany koa izy ireo tao amin'ny zoro havanana ary nampifandraisiny tamin'ity fanoherana voaaro ity. Raha vantany vao mahatsapa ny fahalavoana goavana avy amin'i Etazonia, ny endrika fanoherana rehetra ihany koa dia hiverina amin'ny lozabe iray ihany. Ny famaritana tsara indrindra momba ity dingana ity dia hita ao ity lahatsoratra ity avy amin'ny mpandalina Brandon Smith ao amin'ny tranokala alt-market.com. Mamporisika mafy anao hamaky ity lahatsoratra ity amim-pitandremana.
Ohatrinona no tiantsika haheno fa misy hackers mandray izany ho an'ny vahoaka ary manala ireo saina sandoka; zavatra iray manontolo izany. Ny torohevitrao: aza mamitaka. Ny lalao fanoherana dia tena faran'izay mendri-kaja ary natao ho azo itokisana, saingy tsy midika izany fa ny herin'ny fanjakana tena izy (a saha manerantany). Izany dia natao hanampiana ny sehatry ny hery henjana bebe kokoa amin'ny saddle. Ny fandrahonana lehibe indrindra amin'ny fahatsiarovantsika dia ny fironantsika hino ny angano; indrindra raha nentina tamim-pinokisana izy ireo.
Tsia, tsy nanome hevitra mazava aho ato amin'ity lahatsoratra ity; Miantso fotsiny ny fahatsapanao mahazatra aho.
Lisitry ny rohy loharano: forbes.com, xandernieuws.punt.nl, alt-market.com
Fantatrao ve ny olona iray tsy ankasitrahanao any an-trano, fa amin'ny media sosialy amin'ny andro rehetra? Inoffizieller Mitarbeiter?
Robert Jensen ilay antsoina hoe mpikomy avy amin'ny elatra havanana, fa ny mpivaro-tena
Tags: 9 / 11, 911, lalina, antontan-taratasy, dotcom, Featured, Julian Assange, Kim, extrication, mpanohitra, fanjakana, ny maintimainty, Wikileaks
7 Janoary 2019 ao amin'ny 23: 58
8 Janoary 2019 ao amin'ny 00: 01
8 Janoary 2019 ao amin'ny 00: 04
8 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 36
@Riffian, dia lasa be lavitra kokoa amin 'izany izy ireo hifehy ny politika ivelan'i Etazonia sy manodinkodina izy hanontany zavatra toy ny Golana Heights, ary aoka ho fantatrareo fa Rothschild orinasa toy ny Génie Energy any miandry amin'ny nanara-morona mba hiverenana tapitrisa tapitrisany ny tombony hatramin'ny mba fenoy .. ORBIS tsy sufficit
9 Janoary 2019 ao amin'ny 06: 37
Riffian Fantatrao fa manohitra fanoherana i Henry Makow? Narary aho.
Manana aho - na dia efa nahatsapa aza aho fa Shawow dia fialokalofana - ny rohy ambony indray dia nizara. Nahoana no alefaso any amin'i Fetzer sy ireo mpiandry vavahady hafa foana ny lalana hodiavina? Ny Voodoo dia ilay eritreritra vaovao 911. Ary koa tsy misy dikany momba ny antsoina hoe bobble marijuana. satria ny overproduction .... (?) Inona no teboka.
Inona moa izany Makow ho an'ny adala? Ekipa ratsy tahaka an'i Fetzer, Kim dotcom, Dark Overlord, Kevin Barret etc.etc. Azontsika atao ve ny tsy mandefa zavatra izay tsy avy amin'ny fanoherana mifehy sy ny mpiandry vavahady 911?
Toa tsy izany. Satria tsy misy zavatra hafa. Ny fikambanan'ny klioba Gelatin dia natsangana ho 1 amin'ireo fanakona maro. Izany Makow dia mbola manahy ny hiakatra amin'izany. Mamenatra an'io fanodikodinam-po io eo imason'ireo "mpikatsaka ny marina". Ary afaka manao izany izy satria fantany fa tsy mahalala ny fiarovan-tenan'ny 911.
9 Janoary 2019 ao amin'ny 10: 04
Miaraka amin'ny dt? Izaho koa dia malahelo amin'ny fahatezerako! (ny smurfs dia ny mnemonic ho an'ny fifandonana)
Ary ho an'ny Makow's eto amin'izao tontolo izao dia mampiasa ny fitsapana duck aho.
13 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 35
Ny fahadisoany ihany no diso; Ny banky (banky Swiss) indray no mpandresy goavana indrindra izay mijanona tsy mahita; https://www.youtube.com/watch?v=p-BFmn2S_jU
8 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 45
Ary mihaza ny lelan-tsabatra ny amin'ny olona an-tapitrisany tsy ho voasazy, fa valisoa eto amin'ity tontolo ity ..
Ny filoha WJC Ronald Lauder dia manome voninahitra ny Sekoly teo aloha. ny fanjakana Colin Powell miaraka amin'ny Theodor Herzl Award
Ny Isiraely dia naniraka Jiosy miliaridera hanao fifonana amintsika, hoy ny praiminisitra tiorka
Erdoğan fitakiana 'Jiosy manan-karena indrindra eto an-tany', dia nangataka mba hanamboatra fifandraisana; tatitra milaza zava-miafina Tycoon anie ho Ron Lauder
8 Janoary 2019 ao amin'ny 16: 21
Tsy maintsy manohy mandihy dihy Erdo 😀 ihany ianao
« Ahoana no ahafahantsika manakana ny fizotry ny faminaniana amin'ny andro farany?
Fanehoan-kevitry ny lehilahy sy ny sonia SGP mpitarika ny Van der Staaij eo ambany fanambaran'i Nashville: fampielezan-kevitra avana amin'ny avana »
Total visits: 12.325.237
Camera 2 op Martin Vrijland dia mitaky ny fanafihana ny tranoben'ny Telegraaf
ZalmInBlik op Handeha ady ve eo amin'ny Etazonia sy Iran amin'izao fotoana izao?
Zandi Eyes op Handeha ady ve eo amin'ny Etazonia sy Iran amin'izao fotoana izao?
Fakafakao op Ny NOS sy RTL dia mandinika tsara ny ala lalina mba hamonosana ny vokariny lalina